Sharciga mudada aad Sweden ka maqnaan karto | Somaliska
Xisbiyo dhowr ah ayaa soo jeediyay in la siyaadiyo waqtiga shuruuda ah ee haddii qof deganaanshaha Sweden heysta wadanka dibada uga maqnaado mudo ka badan 1 sano. Xisbiga deegaanka (Miljöpartiet) ayaa soo jeediyay in waqtigii la sameeyay sharcigaas aduunku uu kala xirnaa balse hada lays ku furmay. Dowlada ayaa gudi ka gooban xisbiyo badan u saartay arintaan in ay soo baaraan oo la doonaya in ay soo bandhigaan taladooda mudo 1 sano gudahood ah. Xisbiga keliya ee diiday arintaan ayaa ah xisbiga cunsuriga SD. Shuruudaan deganaanshaha tooska ah ayaa ah mid caqabad ku ah dadka Soomaaliyeed ayadoo ay adagtahay in aad wadanka ka maqnaato mudo dheer haddii aadan baasaboorka weyn lahayn. Sharcigaan cusub haddii uu soo baxo ayuu u sahlayaa dad badan in ay howlahooda soo qabsadaan. Xisbga Deegaanka ayaa sheegay in dad badan ay fursad u heli karaan in ay ganacsi ka soo sameeyaan wadamadooda ayagoon lumin sharciga deganaanshaha Sweden ama aan lagu xujeyn in ay waqti xiriir ah degenaayeen Sweden si ay dhalashada Sweden u qaataan.
Xisbiyo dhowr ah ayaa soo jeediyay in la siyaadiyo waqtiga shuruuda ah ee haddii qof deganaanshaha Sweden heysta wadanka dibada uga maqnaado mudo ka badan 1 sano.
Xisbiga deegaanka (Miljöpartiet) ayaa soo jeediyay in waqtigii la sameeyay sharcigaas aduunku uu kala xirnaa balse hada lays ku furmay.
Dowlada ayaa gudi ka gooban xisbiyo badan u saartay arintaan in ay soo baaraan oo la doonaya in ay soo bandhigaan taladooda mudo 1 sano gudahood ah. Xisbiga keliya ee diiday arintaan ayaa ah xisbiga cunsuriga SD.
Shuruudaan deganaanshaha tooska ah ayaa ah mid caqabad ku ah dadka Soomaaliyeed ayadoo ay adagtahay in aad wadanka ka maqnaato mudo dheer haddii aadan baasaboorka weyn lahayn. Sharcigaan cusub haddii uu soo baxo ayuu u sahlayaa dad badan in ay howlahooda soo qabsadaan.
Xisbga Deegaanka ayaa sheegay in dad badan ay fursad u heli karaan in ay ganacsi ka soo sameeyaan wadamadooda ayagoon lumin sharciga deganaanshaha Sweden ama aan lagu xujeyn in ay waqti xiriir ah degenaayeen Sweden si ay dhalashada Sweden u qaataan.
Gabar xijaabka dartiis shaqo loogu diiday oo dacweysay shirkadii
Qofka sharciga wayn haysta inta uu doono ayu kamaqnan karaa asago lumin dhalashada swedan
walalow jimcaale adigo mahadsan sharcigan wali mala dhaqan geliyay iisoo jawaab
Najax sharcigaas wali lama dhaqan galin. Gudi ayaa soo bandhigay wali baarlamaanka kama fariisan. Haddii la dhaqan galiyo waan soo qori doonaa. insha Allah
walal jimcale aad ayad u mahadsantahay.